I-Trimble ithenga i-Ashtech; Yintoni esinokuyilindela-iGeofumadas
Epreli, 2011 GPS / Izixhobo
Iindaba azizange zikumangalise, kula maxesha ukuba iinkampani ezinkulu zithenge abathengiselwano bazo, zidibanise kwaye zidibanise zibe zicucu; kodwa ngokungathandabuzeki sikholelwa ekubeni oko kwenzeka ngeenkampani ezenzile izixhobo esisisebenzisileyo okanye ziceba ukuzuza.
Ngokoluvo lwam nangomhlobo olungileyo esabelana naye ngalo mbandela, ayothusi loo nto. Ziziphumo zokudityaniswa kwehlabathi kunye nefusion engenakuphepheka yetekhnoloji yokufaka, ukuhambisa kunye nokuhambisa idatha yeemephu Akukho nto yokwenza nendlela ababekiyo kolo thelekiso lwe izitishi ezipheleleyo (60 kwiimpawu ezili-11). Inyani yile yokuba ukhuphiswano (ngaphandle kwetekhnoloji yaseTshayina), luhlala kwezi zintathu zinkulu:
EUnited States (Trimble)
Kodwa nganye kuzo ivela kwiimbali ezinde kangangokuba zibonisa indlela ubuNjineli boLuntu, imephu yeemifanekiso, ubume bendawo, ubume bendawo, iGIS, kunye nezothutho ezidibene njengamacandelo anokungalingani. Ukuvela kweetekhnoloji ze-CAD / CAM / CAE, iikhompyuter, elektroniki kunye ne-intanethi zongezwa ngentshisekelo enomdla.
Kwimeko kaLeica (Swizalend), yindlalifa yezixhobo zasendle esasizisebenzisa eYunivesithi, ezinembali ukusukela nge-1819, ezinxulumene nokwenziwa kweekhamera ezidumileyo zeLeitz. Ukushwankathela ukufunyanwa, kwicandelo lokufota kunye nokuziva okude bathenga i-ERDAS kunye ne-LH Systems ngo-2001 kunye ne-ER Mapper, Ionic kunye ne-Acquis ngo-2007.
Ngoku uHexagon AB (isiSweden) ungumnini weLeica, njengeGeomax kwaye kutshanje wathenga i-Intergraph (2010).
Kwimeko ye Topcon (IsiJapan), sivela ngo-1932; kwi-2000 iTopcom yathenga iJavad; IKEE ngo-2006 kunye neSokkia ngo-2008. Inyathelo elilandelayo linokuba yinkampani yaseTshayina, engaziwa kakhulu kwindawo esihlala kuyo kodwa ngokukhula kwehlabathi okunakho ukufunxa iTopcon ebisikelwe umda kwezinye iinkalo zesicelo.
Kwaye ityala likaTymble, kwelicala lehlabathi kutsha nje (ngo-1978) kodwa nangobundlongondlongo beenkampani zaseMntla Melika. Yayineengcambu ngeHewlet Packard; Ngo-1990 uDatacom wangena kwiphakheji, emva koko ngo-2000 yathenga iSpectra Precision kunye neTDS, ngo-2003 uNikon; ngo-2004 MENSI, GeoNav; kwi-2005 Pacific Crest, MTS kunye neApache Technologies kunye neApplanix.
Ke ngo-2006 wathenga i-APS, i-XYZ, iQuantm, iBinWyse Eleven, iMeridian kwaye ke uluhlu luyaqhubeka ... olubandakanya phakathi kwamva nje Definiens Ngo-2010 ukuthengwa kwe-Ashtech ngo-2011 akukho ngaphezu kokufunyanwa nje okutsha-Kakade, ngaphandle kweMagellan eyayithengisiwe-.
Ezi nkqubo zihlala zingabulali ubuchwepheshe obutsha kodwa ziyazibulala ezo ziphelelwa lixesha. I-Trimble uthenga i-Ashtech yokunyusa ukhuphiswano lwe-Spectra Precision, hayi ukubulala itekhnoloji ye-BLADE njengoko ndiqonda ukuza kuthi ga ngoku, siza kubona kamva.
"Ukudibanisa ipotifoliyo ebanzi ye-Ashtech yeemveliso ze-GNSS kunye nenethiwekhi yokusasazwa kweSpectra Precision inokunika abavavanyi ukhetho olululo olunomdla olusebenzayo."
Ngale nto, kucacisiwe ukuba asisayi kuphinda siyibone i-Mobile Mapper 6 eyayivela eMagellan, kuphela umgca omtsha obizwa ngokuba yi-Mobile Mapper 10 kunye ne-Mobile Mapper 100. Ndandibonile iintsuku ezimbalwa ezedlule, unikeza i-40 cm kwisithuthi kunye no-cmNXX ngaphantsi kwe-post-processing; ngelixa i-MM10 incinci kakhulu kodwa iya kuthengiswa kakhulu kwiinjongo ze-cadastre zasemaphandleni:
Kuya kufuneka ukubona, kodwa kuya kufuneka ucinge ngesixhobo se-US $ 1,500 okanye ngaphantsi, ngeWindows Mobile evulekileyo, enekhamera, isoftware ye-gis, ulungiselelo lwasemva kunye nokuba ungadibanisa inkqubo yokuqokelela idatha yezitishi zebluetooth. Isixhobo esinamandla ngokuchasene ne- $ 2,400 okanye nangaphezulu esiya kubizwa ngumqokeleli wesikhululo ngaphandle kwe-GPS GIS. Akukho nto enokuyenza ngokulula Imephu yeMapper 6, nangona ixhasa i-RTK; emva kwethutyana umqokeleli wesikhululo unokwenziwa ngesixhobo kunye nesoftware yeSokkia's SSF
Ngokubhekiselele kwicala le Phakamisa i3 Esi sigwebo siyaphela, siza kubona kuphela iSpark 100 kunye nePromark 200. Umahluko wesibini nowokuqala kukuba i-PMK200 isebenza ngamaza aphindwe kabini eGPS, okanye i-GLONASS kunye neGPS kwisantya esinye. Lumka, ayiyixhasi i-GLONASS rhoqo.
Kodwa phakathi kwe-GLONASS / GPS yokuhamba rhoqo kunye ne-GPS yokuhamba kabini, ndingakhetha ukhetho lwesibini-ubuncinci kuma-tropics aseMerika akukho zindlela ezininzi-.
Zombini i-Promark kunye ne-Mobile Mapper 100 ngamaqela anehardware efanayo kunye nesoftware. Ngendlela engamaqela ahlaselayo, umba wokumiselwa, ukuqala nge-MM100; Emva koko unokuthenga i-eriyali ene-frequency ezimbini zangaphandle (kukho i-Promark apho), ukuba ufuna ngaphezulu, ungadibanisa isoftware yomqokeleli kunye ne-RTK kwaye uneqela elikhulu.
Ngethemba ukuba ukuthengwa kukuhle kubo bonke.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Imizuzu, iingxaki eziqhelekileyo
Post Next Best of Zonum for CAD / GISOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "Trimble Buys Ashtech; singalindela ntoni "
Mario Reina O uthi:
Unolwazi oluhle kakhulu, siyabonga